အရောင်းအဝယ် ဘယ်လိုစရမလဲ? – FBS
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်)
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (မိုဘိုင်း)
العربية‎ English (IN)‎ English (US)‎ Español‎ Filipino‎ Français (France)‎ Bahasa Indonesia‎ 日本語‎ 한국어‎ Bahasa Melayu‎ Português do Brasil‎ ไทย‎ Türkçe‎ اردو‎ Tiếng Việt‎ 简体中文‎
العربية English (IN) English (US) Español Filipino Français (France) Bahasa Indonesia 日本語 한국어 Bahasa Melayu Português do Brasil ไทย Türkçe اردو Tiếng Việt 简体中文
အရောင်းအဝယ် မှတ်တမ်း အစီရင်ခံစာ။ ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ? (MT4)
MetaTrader ပလက်ဖောင်း (MacOS) ထည့်ရန်ကြိုးစားစဉ် အမှားတွေ့ရသည်
ဖုန်း (MetaTrader5)မှတဆင့် ကိုယ်ပိုင် အရောင်းအဝယ်စကားဝှက် ဖန်တီးချင်ပါသည်
ဖုန်း (MetaTrader4) မှတဆင့် အရောင်းအဝယ်စကားဝှက် ဖန်တီးချင်ပါသည်
Ping တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲ နှင့် ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲ?
အရောင်းအဝယ်မှတ်တမ်း အစီရင်ခံစာ။ ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ? (MT5)
စကားဝှက်နှစ်ခု (မာစတာနှင့် မြှုပ်နှံသူ) ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း?
MetaTrader ပလပ်ဖောင်းမှ မှတ်တမ်းဒေတာကို ဘယ်လိုထုတ်မလဲ?
Forex မှာစတင်ရောင်းဝယ်လိုပါသလား? ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဤလင့်ခ်ကို စစ်ဆေးရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဲဒီမှာ အဖိုးတန် အကြံပြုချက်အချို့ကို သင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်စတင်ရန် အဆင့်၃ဆင့် ဒီမှာပါ:
သင့်နိုင်ငံအတွက် ရနိုင်သော မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်သို့ ငွေထည့်ပါ ငွေများကို (အကောင့်စစ်များအတွက်သာ)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်မှ MetaTrader4 (သို့) MetaTrader5 ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲပြီး၊ သင့်စက်တွင် ထည့်သွင်းပါ။
သင်၏ပထမဆုံးအရောင်းအဝယ်စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသေးဘူးလား? အကြံပြုချက်လေးတွေကို ဒီမှာကြည့်ပါ:
အော်ဒါ (ပိုဇစ်ရှင်) ကို ဘယ်လိုဖွင့်/ပိတ်ရမလဲ?
ပရိုဂရမ်မီနူးရှိ “ကိရိယာများ” → “အော်ဒါအသစ်” ကိုရွေးချယ်ပါ။
“စျေးကွက်စောင့်ကြည့်” ဝင်းဒိုးရှိ အရောင်းအဝယ်ပစ္စည်း၏အမည်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ကိရိယာဘားရှိ “အော်ဒါအသစ်” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ကီးဘုတ်ရှိ F9 ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပိုဇစ်ရှင်တစ်ခုဖွင့်သောအခါတွင် အောက်ပါကွက်လပ်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်:
သင်္ကေတ - ရောင်းဝယ်ရန်ပစ္စည်းရွေးချယ်ပါ။
Volume - အမှာစာ၏အသံအတိုးအကျယ် (အမြောက်အများအရေအတွက်) ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Stop Loss – Stop Loss အဆင့် (မဖြစ်မနေ) သတ်မှတ်ပါ။ ၀.၀၀၀ ဖြစ်ပါက အော်ဒါမထားဟု ယူဆပါသည်။
Take Profit - Take Profit အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေ ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါ။ ၀.၀၀၀ ဖြစ်ပါက အော်ဒါမထားဟု ယူဆပါသည်
သတိထားပါ! အကယ်၍ Stop Loss နှင့် Take Profit အဆင့်များကို လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့် အလွန်နီးကပ်နေပါက၊ "မှားယွင်းနေသော S/L (သို့) T/P" မက်ဆေ့ချ်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ သင်သည် လက်ရှိစျေးနှုန်းမှ အဆင့်များကို ရွှေ့ပြီး တောင်းဆိုချက်ကို ထပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှာစာကိုဖွင့်ရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ F9 ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး "ရိုက်ပါ" မီနူးတွင် "ဆိုင်းငံ့အော်ဒါ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပိုဇစ်ရှင်ပိတ်ရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ဇယားအောက်ရှိ “အရောင်းအဝယ်” ဧရိယာရှိ မှာယူမှုအပေါ် ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပြီး မီနူးရှိ “အော်ဒါပိတ်ပါ” ကို ရွေးချယ်ပါ။ အော်ဒါပိတ်ရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ "ရောင်းဝယ်ပါ" ဧရိယာရှိ ၎င်းကို နှစ်ချက်နှိပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Take Profit နှင့်/သို့မဟုတ် Stop Loss ၏ သတ်မှတ်အဆင့်များပါရှိသော အော်ဒါသည် ရွေးချယ်ထားသော Take Profit (သို့) Stop Loss သို့ရောက်ရှိသောအခါ စျေးနှုန်းသည် အလိုအလျောက်ပိတ်ပါမည်။ Long ပိုဇစ်ရှင်ကို ဝယ်(Bid)စျေး၊ Short ပိုဇစ်ရှင် – ရောင်း (Ask)စျေးဖြင့် ပိတ်ပါသည်။
MetaTrader ပလပ်ဖောင်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် သင်သည် MetaTrader ပြုစုသူများ၏ ဝဘ်ဆိုက် သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်သည် တာမီနယ်၏ PC ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေပါက၊ ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ "F1" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသုံးဝင်သော သရုပ်ပြဗီဒီယိုများ အချို့ကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လမ်းညွှန်စာအုပ် ကိုဖတ်ရန် သင့်အား အကြံပြုပါသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အရောင်းအဝယ်နှင့် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အခွင့်အရေးမရနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးအပ်ပါသည်။ စာတွေ့လက်တွေ့ ဗဟုသုတများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုသည်ဆိုပါက၊ ဦးစွာ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနေနှင့်၊ သင်သည် နောင်တွင် အကောင့်စစ်ဖွင့်လိုသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဝယ်အခြေအနေများ အလုပ်လုပ်ပုံကို ကြည့်ရှုရန် ဒီမိုအကောင့် ဖွင့်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးထားပါသည်။ နားလည်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
မေးခွန်း ရှိပါသေးလား၊ တောင်းဆိုလိုသည့်ကိစ္စကို ပေးပို့ပါ။
အရောင်းအဝယ်စကားဝှက် (မိုဘိုင်း ပါစင်နယ်ဧရိယာ)ကို မေ့သွားပါသည်
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်)တွင် အနိမ့်ဆုံးထည့်ငွေပမာဏက ဘာလဲ?
ဆုံးရှုံးနိုင်မှု အသိပေးချက်: ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအသိပေးချက်: အရောင်းအဝယ်မစတင်ခင် ငွေကြေးစျေးကွက်နှင့်မာဂျင်ဖြင့်အရာင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ဆုံးရှုံးမှုများရှိလာနိုင်သည်ကို သင်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဆင့်မည်မျှရှိသည်ကိုလည်း သိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
[ဤဝဘ်ဆိုဒ်] မှ အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများ၊ ဓာတ်ပုံများအစရှိသည်တို့ကို အင်တာနက်နှင့် အခြားကိစ္စများတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖြင်း၊ ကူးယူဖော်ပြခြင်း၊ ပုံတူပွားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်တောင်းရမည်။